What are VkShop, VkStore and VkPoint ?
Bet Channel »
VkStore, VkShop and Vk GameCity »
Author Topic: What are VkShop, VkStore and VkPoint ? (Read 1068 times)
« on: September 08, 2014, 11:28:32 am »
Vakok Online Store and Shop Guide
Vakok Member များအတွက် Ingame Item များ၊ Gaming Accessories , Game နှင့် ပါတ်သတ်သော ပစ္စည်းများ ကို Online ပေါ်မှ နေ အလွှယ်တကူ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်စေရန် အတွက် Vakok Store and Vakok Shop များကို ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ ၀ယ်ယူရန်အတွက် Vk Point (or) VkReward များလိုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Vk Point ဆိုသည်မှာ - Vakok Top-Up Card အား မိမိ account တွင်ထည့်သွင်းပါက VkPoint ရရှိပါမည်။ 3500 တန် တစ်ကဒ် ထည့်သွင်းလျှင် VkPoint - 3500 ရရှိပါမည်။ Vakok TopUp Card များကို အမြို့ အနယ်နယ်ရှိ Vakok Reseller Shop များ နှင့် ABC Convenience Store များတွင် 24/7 ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
VkPoint နဲ့ ဘာတွေ လုပ်လို့ ရမလဲ ?
(1) VkPoint နဲ့www.vakok.net/store , www.vakok.net/ashop တို့ က Item တွေကို ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
(2) VkPoint ကို player အချင်းချင်း လွှဲပြောင်းပေးလို့ ရပါတယ် ( www.vakok.net/pointtransfer )
(3) VkPoint ကို တိုးပွားအောင် www.vakok.net/soccer , www.vakok.net/casino တို့ မှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
(4) VkPoint နဲ့InGame Character များကို နာမည်ပြောင်းချင်း ၊ race change ခြင်းအစရှိသည်တို့ ကို ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။
Vk Reward ဆိုသည်မှာ - WOW, AION, Vakok TOURNAMENT စသည့်တို့ တွင် Vakok မှ အခါအားလျှော်စွာ ပြုလုပ်ပေးသော ပြိုင်ပွဲများ ၊ Event များတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည်ဖြစ်သော Point များကို Vk Point ဟုခေါ်ပါသည်။ Point များများရရှိရန် ပြိုင်ပွဲများ ၊ Event များတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါမည်။
Vakok Store ( www.vakok.net/store )
Vakok Shop ( www.vakok.net/ashop)
Vakok Shop တွင် Gaming နှင့် သက်ဆိုင်သော အပြင်ပစ္စည်းများ၊ Ingame ပစ္စည်းများ ကို VkPoint and VkReward များ ဖြင့်ရောင်းချပေးထားပါသည်။ Vk Shop မှ ၀ယ်ယူသော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူ သည့်အခါ ချက်ခြင်းရရှိမည် မဟုတ်ပဲ Vakok Delivery Service Team မှ (၄၈) နာ၇ီ အတွင်း ပို့ ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ နယ် ပြင်ပ မှ ၀ယ်ယူ မည်ဆိုပါက ကားဂိတ်အရောက် ပို့ ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Vakok Shop or Vakok Store နှင့်ပါတ်သတ်ပြီး အသေးစိပ် စုံစမ်းရန် ဖုန်းနံပါတ် နှင့် လိပ်စာ
24 Hours Customer Service Phone NO. 01 522945
Office Hour : 09 250647755 , 09 505 9811
Reign of Vakok Customer Service Address : ပါရမီစိန်ဂေဟာ အနီး၊ စိတ်တိုင်းကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ ၊ ပါရမီလမ်း ၊ လှိုင်မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Re: What are VkShop, VkStore and VkPoint ?
« Reply #1 on: October 07, 2014, 07:56:10 pm »
can't buy payment with mpt ph bill?
A life, which is just like an isometric art.
« Reply #2 on: October 08, 2014, 12:51:36 am »
Vakok Reseller ဆိုင်များတွင် Vakok Top-Up Card များသွားရောက် ၀ယ်ယူ ရန် အဆင်မပြေသူများ အတွက် MPT ဖုန်းဘေလ် ဖြင့်လည်း Top Up Code ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြုလုပ်ရမည် ပုံစံမှာ .. vakok ဆိုသောစားသား အား 188229 ဖုန်းနံပါတ်သို့SMS ပေးပို့ ပါက . သင်၏ ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ ၄၅၀၀ ကျပ်အား ထုတ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပြီး ၁၅ - ၃၀ မိနစ်အတွင်း သင့်ထံသို့SMS တစ်စောင်ပြန်လည် ပေးပို့ ပါလိမ့်မည် .. ထိုထဲတွင် ၃၅၀၀ Vkpoint ဖြည့်သွင်း၍ရသော Cod နံပါတ်တစ်ခု ပါရှိပါမည်။ ၄င်း code နံပါတ်အား http://vakok.net/vkcoin တွင် ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
** အကယ်၍ ၃၀ မိနစ်ထက် ကျော်လွန်သည်အထိ SMS ပြန်လည်မရရှိပါက 01 2399188 သို့တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
သတိ။ မချစ်လျှင် kick တတ် သည်။
« Reply #3 on: October 12, 2014, 04:57:35 pm »
Ooreedo နဲ့ကော မရဘူးလား
« Reply #4 on: October 12, 2014, 05:21:45 pm »
Quote from: hwmyatt on October 12, 2014, 04:57:35 pm
Ooredoo နဲ့ မရပါဘူး . . . MPT SIM card တွေနဲ့ပဲ အလုပ်အလုပ် တာပါ။